Palestiniana Mpanao Gazety Manoritsoritra Ireo Andro Maro Nijaliany, Ireo Tsindrona Mistery Nataon’ny Sampam-pitsikilovana Palestiniana Azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2017 4:59 GMT
Miatrika fiampangàna maro avy amin'ireo vondrona mpiaro zo ny Palestinian Authority (PA) noho ny nampiharany fampijaliana “feno habibiana” tamin'i Sami al-Saai, toniandahatsoratra no sady mpitatitra vaovao.
Ny 2 Febroary 2017, nosamborin'ny Sampam-Pitsikilovana Palestiniana tao an-tanàna niaviany tao Tulkarem tany Amoron'i Jordàna i Al-Saai, rehefa nandefasana fiantsoana hanaovana fanadihadiana. Niampangàna azy ny ‘fihantsiana korontana ifanaovan'ny sekta” tao anaty lahatsoratra Facebook. Ny 8 Febroary, namoaka didy famotsorana azy takalozana fandoavana onitra ny fitsaràna iray. Naloan'i Al-Saai ny onitra, saingy tsy navotsotra izy fa nafindra ho any amin'ny fonjan'i Jericho.
Araka ny Lalàna Fotora ao Palestina, na iza na iza voampanga ho nanao heloka bevava dia mitovy amin'ny tsy manantsiny mandra-pivoakan'ny porofo manameloka azy. Mbola iantohan'ilay lalàna misimisy kokoa aza ny hoe “ny lalàna irery ihany no mamaritra ny heloka sy ny sazy” ary ny “didim-pitsaràna irery ihany no mametraka ny sazy” (Andininy faha-15).
Al-Saai dia miasa ho an'ny Al Fajer Al Jadeed, TV mahaleotena ao an-toerana, izay itaterany momba ny fivoaran'ny raharaha politika ao amin'ny fari-piadiian'i Tulkarem. Tamin'ny 2016, tao anaty tetikasa iray tsy misy ifandraisany amin'ny asany ao amin'ny Al Fajer Al Jadeed, dia nandefa andianà tatitra momba ireo Palestiniana migadra noho ny resaka politika any Israely sy any Amoron'i Jordàna izy ho an'ny Hamas, ilay hetsik'ireo mpitolona Islamista mifehy an'i Gaza ary tena fahavalo politika voalohany ho an'ny antoko politika nasionalista Fatah, izay mifehy ny Palestinian Authority (PA). Ahian'i Al-Saai ho fanarontsaronan-javatra entina hisamborana azy fotsiny io asa io.
Rehefa nandeha tany am-ponja nitsidika azy ny reniny no nivoaka voalohany ireo tatitra momba ny fampijaliana an'i Al-Saai, teo no nilazany tamin'ny reniny hoe isanandro izy no ampijaliana ary terena hibaboka ireo heloka tsy nataony velively. Nolazain'ny reniny fa nodarohana ny zanany lahy ary nahantona tamin'ny tolànam-baravarana sy varavarankely. Noterena hijoro nandritry ny fotoana elabe, tsy navela natory nandritry ny andro maro, ary natokana taminà efitra tery dia tery sy mangatsiaka tsy misy fandriana na lamba firakotra. Nolazain'i Al-Saai an-dreniny ihany koa fa in'efatra isanandro izy no notsindronina zava-mahadomelina tsy fantany.
Raha niteny tamin'ireo haino aman-jery ao an-toerana, nampitandrina ny vadiny fa mety ho fatin'ny fampijaliana atao azy izy. “Manokafa trano fiandrasampaty ho ahy, tsy ho ela dia handre momba ny fahafatesako ianareo,” hoy i Al-Saai tamin'ny vadiny tao anaty hafatra iray nasainy nampitain'ny reniny ho azy.
Nandà mafy ireny tatitra ireny ny Fampanoavana ao Palestina, tamin'ny filazàna fa nisafo tany amin'ny fonjan'i Jricho izy ary tsy nahita porofo ny fisian'ny fampijaliana ireo mifonja ao.
Nolavin'ny Sendikàn'ireo Palestiniana Mpanao Gazety ihany koa ny hoe nampijaliana i Al-Saai. Tao anaty fanambaràna iray dia nilaza ilay sendikà fa rehefa nitsidika an'i Al-Saai tany am-ponja ny mpikambana vitsivitsy avy ao aminy, dia nanamafy i Al-Saai fa tsaho diso fotsiny ireo vaovao momba ny fampijaliana azy. Niverina tamin'ny fanambaràna nataony i Al-Saai taorian'ny famotsorana azy, tamin'ny fanazavàna fa natahotra ny hiteny izy noho izy niharan'ny fandrahonana.
Fotoana fohy taorian'ny namotsorana azy, niteny momba izay tena nanjo azy marina tany am-ponja izy tao anaty resaka an.telefaona nifanaovany tamin'i Fadi Arouri, Palestiniana iray mpaka sary fanao an-gazety ary iray amin'ireo mpamoaka hevitra be mpanaraka indrindra amin'ny Facebook ao Palestina. Hoy i Al-Saai tamin'i Arouri:
Ny Sendikàn'ireo mpanao gazety, izay ny vina dia ny hiarovana “ny maha-matianina, ny zo maha-olona sy ara-toerkarena ary sosialin'ireo mpanao gazety, ary ny fanohanana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Palestina,” dia mbola naneho hevitra ihany tamin'ilay fanambaràna vaovao navoakan'i Al-Saai. Tao amin'ny fanambaràny tany aloha, nanizingizina ilay sendikà fa tsy nisy nifandraisany tamin'ny asa maha-mpanao gazety azy ny nisamborana an'ilay mpanao gazety, na resaka fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, ary ny mpanao gazety, noho ny asany, dia tsy olona natao tsy hanaja lalàna.
Tany aloha dia efa nosamborina noho ireo lahatsoratra navoakany tety anaty aterineto ihany koa i Al-Saai. Tamin'ny taona lasa, nosamborin'ny manampahefana israeliana izy ary nampangaina ho “nihantsy korontana” tamin'ny Facebook. Nomena sazy sivy volana am-ponja izy, ary navotsotra tamin'ny Novambra 2016.
Na misy na tsia ny fifandraisan'ny asa maha-mpanao gazety azy tamin'ny nisamboran'ny PA an'i Al-Saai tamin'ity indray mandeha ity, dia olana iray goavana ny fampijaliana ireo gadra Palestiniana, isan'izany ireo mpanao gazety sy mpikatroka, eo an-tànan'ny PA. Ny Human Rights Watch dia naharakitra tranga marobe ahitàna Paletsiniana mpanao gazety naiditra am-ponja, nilàna vaniny sy nampijaliana noho ny fanehoan-dry zareo fanakianana, na noho ny fifandraisan'izy ireny amin'ny Hamas, ilay antoko fahavalon'ny PA.